I-MyYappyDog: I-CRM yoLuntu yeeArhente zoThengiso lweeNdawo | Martech Zone
Kukho uqalo olutsha olufumana ukubambeka e-Indianapolis nge Iiarhente zoThengiso lweZindlu, kwaye ibizwa Inja yam Yappy. Ukuba ungadibanisa iqonga lonxibelelwano elilula elifileyo kunye neqonga lolawulo lobudlelwane babathengi elingenangqondo, une-CRM yeNtlalontle ebizwa ngokuba Yinja yam Yappy.
Abathathu kwabane kubathengi bearhente yokuthengiswa kwezindlu abathe bathi baya kuphinda benze ishishini kunye nearhente yabo, kodwa yi-3% kuphela eyenzayo! UDawn Schnaiter, uMsunguli we-Co Inja yam Yappy.
Ukuba iiarhente bezinesisombululo esifikelelekayo nesilula sokugcina unxibelelwano nabathengi bazo, ziya kufumaneka xa abo bantu befuduka, bekhula belikhaya elikhulu, okanye xa usapho okanye abahlobo babo befuna ukuthengisa. Yonke into emele ukuyenza kukuchukumisa isiseko rhoqo ... Inja yam Yappy masenze njalo.
The Iqonga leCRM yoLuntu inika amandla okuposa kuzo zonke iitshaneli zakho zentlalo, ibhokisi yokungenayo yokufumana imifanekiso, ukukwazi ukuthumela kunye nokulinganisa imikhankaso ye-imeyile eninzi, kunye nomphathi womxholo. Ukudibana kunokufezekiswa ngokusetyenziswa kweakhawunti yomncedisi (ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo) kunye neemvume ezithile zomsebenzisi kwinto abanokukubona nabangayiboniyo. Kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukunika ingxelo ngomsebenzi wakho, ukuthengisa kunye nenkcitho zibandakanyiwe!
Isakhono seCRM silungile, sikuvumela ukuba ubonise abona baxhasi babaluleke kakhulu kunye neshedyuli yemisebenzi yokunxibelelana nabo amaxesha ngamaxesha.
Imithombo yeendaba yeendaba kwi-Intanethi
Iinjongo kunye neendleko
Njengakwisiqalo esikhulu sokuqala, Inja yam e-Yappy yasekwa ngumntu owayenesidingo- Dawn the Real Estate Agent - Riann Stroud - umphathi wemveliso odibanisa iqonga! Ndiyazithanda iziqalo ezakhiweyo kuba abasebenzisi babekhathazekile kuba kungekho sisombululo sikhoyo.
Inja yam e-Yappy inikezela umntu ngamnye, iqela kunye neshishini Xabiso!
Phawula: The Inja yam Yappy iqonga lilunge ngokwenyani kulo naliphi na ikontraka okanye umboneleli ngenkonzo… ngonxibelelwano olusele lusenziwa ngokwezifiso.
tags: email Marketingmzantsiwebizindlu ezithengiswayoababoneleli beenkonzocrm yoluntuulawulo lolwalamano kubathengiibhokisi yezentlaloumpapashi wentlalo
Yintoni ukuthengisa ngentsholongwane? Eminye imizekelo kunye nesizathu sokuba basebenze (okanye khange basebenze)
Nantsi indlela ongashushu ngayo ngeNtengiso yeFuthe